ကိုယ်ဝန်ရှိ စဉ် ကွမ်းစားရင် ဘာဖြစ် တတ် ပါ သလဲ – Shwe Sar
ကိုယ်ဝန်ရှိ စဉ် ကွမ်းစားရင် ဘာဖြစ် တတ် ပါ သလဲ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။
Q. ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်မှာ ကွမ်းစားလို့ ရပါသလား။ ကွမ်းစားမိရင် ကလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသလားရှင့်။
A. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကွမ်းစားရင် မွေးလာတဲ့ကလေးလေးဟာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကွမ်းစားတာက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အရက်သောက်သလိုမျိုး ရရှိတဲ့ ဆိုးကျိုးက အတူတူပါပဲ။ မွေးလာမယ့်ကလေးအပေါ် ရရှိမယ့် ထိခိုက်မှုကလည်း အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကွမ်းစားရင် ဒီအင်န်အေ (DNA) ထိခိုက်မှု ဖြစ် တ တ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သန္ဓေသားကို ထိခိုက်စေတဲ့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကွမ်းကို လုံးဝမစားသင့်ပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ကလေးနို့တိုက်နေတဲ့ အချိန်မှာလည်း ကွမ်းယာကို လုံးဝမ စားသင့်ပါဘူး။
ကွမ်းရွက်ကလည်း သူ့ချည်းပဲဆိုရင် ပိုးသေစေတဲ့ အစွမ်းရှိပြီး ကွမ်းသီးကလည်း သူ့သဘာဝအတိုင်းဆိုရင် ဦးနှောက်ကိုတောင် လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကွမ်းယာထဲမှာ ပြုပြင်ထားတဲ့ ကွမ်းသီးထည့်ပြီး ကွမ်းရွက်၊ ထုံး၊ ဆေးရွက်ကြီးနဲ့ တခြားဆေးတွေနဲ့စားရင် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါ စတဲ့ Metabolic Syndrome တွေ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်း ပိုများစေပါတယ်။ အရင်က ကွမ်းယာစားတာနဲ့ ဒီရောဂါတွေ ဆက်စပ်မှုကို မသိခဲ့ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ တွေ့ရှိတယ်လို့ တိရ စ္ဆာန်တွေကို လေ့လာထားတဲ့ လေ့လာမှုတချို့က ဆိုထားပါတယ်။
ကွမ်းစားရင် အရင်ဆုံးဖြစ်တတ်တာက သွားတွေညစ်ပတ်ပါတယ်။ ကွမ်းတွေကို ဟိုနေရာ၊ ဒီနေရာထွေးရင် ပတ်ဝန်းကျင်လည်း ညစ်ပတ်ပါတယ်။ ကွမ်းစားတာကြောင့် ဆီးကျောက်တည်တာေ တာ့ ဖြစ်နို င်ပါတယ်။ ကွမ်းစားတဲ့ သူတွေဆိုရင် ပါဝင်တဲ့ ဆေးတွေကြောင့် ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကွမ်းရွက်တစ်မျိုးတည်းဆိုရင် ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ကွမ်း၊ ကွမ်းသီး၊ ထုံး၊ ဆေး ရွက်ကြီး နဲ့ တခြားဆေးတွေ ပါတဲ့အတွက် ကယ်လ်ဆီယမ်ကာဗွန်နိတ် ရရှိစေပြီး ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကွမ်းစားတဲ့ကာလနဲ့ စားတဲ့ပမာဏပေါ် မူတည်ပြီး ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုက ကြွဲ ပား သွား ပါတယ်။ တစ်ရက်ကို လူတစ်ယောက်က ဘယ်လောက်ပမာဏ စားသလဲ၊ တစ်နေ့ကွမ်းတစ်ယာပဲ စားတယ်ဆိုရင် အဲဒီလောက်အထိ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှု မရှိပေမယ့် အများ ကြီး စားတယ်၊ ကြာကြာဝါးတယ်ဆိုရင် ပါးစပ်၊ လည်ချောင်း၊ အစာရေမျိုပြွန် စတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်နဲ့ မိခင်နို့ ချိုတိုက်ေ ကျွး စဉ်မှာ ကွမ်း ယာကို လုံးဝမစားသင့်ပါဘူး။
ဒေါကျတာဒျေါဝငျးဝငျးမွငျ့ (အာဟာရဆိုငျရာ အထူးကု ဆရာဝနျကွီး)မှ ဖွကွေားပေးပါသညျ။
Q. ကိုယျဝနျရှိစဉျမှာ ကှမျးစားလို့ ရပါသလား။ ကှမျးစားမိရငျ ကလေးကို ထိခိုကျစနေိုငျပါသလားရှငျ့။
A. ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ ကှမျးစားရငျ မှေးလာတဲ့ကလေးလေးဟာ ကနျြးမာရေး ထိခိုကျနိုငျပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ ကှမျးစားတာက ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ အရကျ သော ကျသလိုမြိုး ရရှိတဲ့ ဆိုးကြိုးက အတူတူပါပဲ။ မှေးလာမယျ့ကလေးအပျေါ ရရှိမယျ့ ထိခိုကျမှုကလညျး အတူတူပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ ကှမျးစားရငျ ဒီအငျနျအေ (DN A) ထိခိုကျမှု ဖွဈ တတျ ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သန်ဓသေားကို ထိခိုကျစတေဲ့အတှကျ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာ ကှမျးကို လုံးဝမစားသငျ့ပါဘူး။ နောကျပွီးတော့ ကလေးနို့တိုကျနတေဲ့ အခြိ နျ မှာလညျး ကှမျးယာကို လုံးဝမ စားသငျ့ပါဘူး။
ကှမျးရှကျကလညျး သူ့ခညျြးပဲဆိုရငျ ပိုးသစေတေဲ့ အစှမျးရှိပွီး ကှမျးသီးကလညျး သူ့သဘာဝအတိုငျးဆိုရငျ ဦးနှောကျကိုတောငျ လှုံ့ဆျောပေးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကှမျးယာထဲမှာ ပွုပွငျ ထားတဲ့ ကှမျးသီးထညျ့ပွီး ကှမျးရှကျ၊ ထုံး၊ ဆေးရှကျကွီးနဲ့ တခွားဆေးတှနေဲ့စားရငျ ကနျြးမာရေးအတှကျ ဆိုးကြိုးတှေ ဖွဈပျေါစပေါတယျ။ ဆီးခြိုရောဂါ၊ သှေးတိုးရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ကငျ ဆာရောဂါ စတဲ့ Metabolic Syndrome တှေ ဖွဈနိုငျခွကေိုလညျး ပိုမြားစပေါတယျ။ အရငျက ကှမျးယာစားတာနဲ့ ဒီရောဂါတှေ ဆကျစပျမှုကို မသိခဲ့ပမေယျ့ အခုနောကျပိုငျးမှာတှေ့ ရှိတယျလို့ တိရစ်ဆာနျတှကေို လလေ့ာထားတဲ့ လလေ့ာမှုတခြို့က ဆိုထားပါတယျ။
ကှမျးစားရငျ အရငျဆုံးဖွဈတတျတာက သှားတှညေဈပတျပါတယျ။ ကှမျးတှကေို ဟိုနရော၊ ဒီနရောထှေးရငျ ပတျဝနျးကငျြလညျး ညဈပတျပါတယျ။ ကှမျးစားတာကွောငျ့ ဆီးကြော ကျတ ညျတာေ တာ့ ဖွဈနို ငျပါတယျ။ ကှမျးစားတဲ့ သူတှဆေိုရငျ ပါဝငျတဲ့ ဆေးတှကွေောငျ့ ခံတှငျးကငျဆာ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ကှမျးရှကျတဈမြိုးတညျးဆိုရငျ ပွဿနာမရှိပါဘူး။ ကှမျး၊ ကှမျး သီး၊ ထုံး၊ ဆေး ရှကျကွီး နဲ့ တခွားဆေးတှေ ပါတဲ့အတှကျ ကယျလျဆီယမျကာဗှနျနိတျ ရရှိစပွေီး ကငျဆာဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ကှမျးစားတဲ့ကာလနဲ့ စားတဲ့ပမာဏပျေါ မူတညျပွီး ကနျြးမာ ရေးထိခိုကျမှုက ကွှဲ ပား သှား ပါတယျ။ တဈရကျကို လူတဈယောကျက ဘယျလောကျပမာဏ စားသလဲ၊ တဈနကှေ့မျးတဈယာပဲ စားတယျဆိုရငျ အဲဒီလောကျအထိ ကနျြးမာ ရေးထိခို ကျမှု မရှိပမေယျ့ အမြား ကွီး စားတယျ၊ ကွာကွာဝါးတယျဆိုရငျ ပါးစပျ၊ လညျခြောငျး၊ အစာရမြေိုပွှနျ စတဲ့ အင်ျဂါအစိတျအပိုငျးတှမှော ကငျဆာဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ကို ယျ ဝနျရှိစဉျနဲ့ မိခငျနို့ ခြိုတိုကျေ ကြှး စဉျမှာ ကှမျး ယာကို လုံးဝမစားသငျ့ပါဘူး။
Previous post ထမ င်းရည် မှ ပေးသော အလှ အပနှင့် ကျန်းမာရေး အတွက် အကျိုးကျေးဇူး များ
Next post ခုလိုကိုဗစ်ကာလလေးမှာ ပရိသတ်တွေ ကို အိမ်မှာပဲနေပြီး အစစ အရာရာ ဂရုစိုက် ဖို့ပြောလိုက် တဲ့ ထက်ထက်ထွန်း